नेपालमा पनि भाइरल हुँदैछ सोनु सङ - संगित - साप्ताहिक
नेपालमा पनि भाइरल हुँदैछ सोनु सङ
यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा छाएकी छिन् सोनु । सोनुका गीत यतिबेला इन्टरनेट, युट्युब तथा
अन्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेका छन् ।
युट्यबुमा उधुम मच्चाइरहेको उक्त गीतको शीर्षक छ— सोनु, तुझा माझ्यावर भरोसा नाही काय ? यो गीतले इन्टनरनेट प्रयोगकर्ताको होस उडाएको छ । सामाजिक सञ्जाल खासगरी युट्युबमा यो गीतले लोकप्रिय छ । मानिसहरू अहिले आ–आफ्नै शैलीमा उक्त गीतको भिडियो बनाएर युट्युबमा अपलोड गरिरहेका छन् । युट्युबमा ती गीत दर्जनौं भाषामा सुन्न पाइन्छ, जसमध्ये गुजराती तथा भोजपुरी भर्सनमा गाइएको गीतलाई दर्शक तथा श्रोताहरूले विशेष मन पराएका छन् ।
वास्तविकता के छ भने सोनु, तुझा माझ्यावर भरोसा नाही काय ? एउटा प्रसिद्ध मराठी गीत हो । मराठी गायक अजय क्षीरसागरलाई यो गीतको वास्तविक सर्जक मानिएको छ । अजयले स्वयंले भने उक्त गीत आफूले ह्वाट्सएपमा फेला पारेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उक्त गीत गाउन निकै सजिलो भएकाले नै कम समयमै यसको कभर भर्सनले लोकप्रियता पाएको हो । मराठी भाषाको उक्त गीतको अर्थ हुन्छ सोनु, तिमीलाई मप्रति भरोसा छैन ? यसमै आधारित भएर युट्युब प्रयोगकर्ताहरूले आ–आफ्नो कथा बयान गर्दै भिडियो अपलोड गरिरहेका छन् । अधिकांश प्रयोगकर्ताले आ–आफ्नै शैलीमा उक्त गीत गाएका छन् । यो गीतले यति धेरै लोकप्रियता पाएको छ कि युट्युबमा सोनु सङ्स टाइप गर्नेबित्तिकै त्यसका सयौं भर्सन उपलब्ध हुन्छन् ।
यो गीत ट्रेन्ड सेटिङको संसारमा एक कदम अघि बढिसकेको छ । अहिलेसम्म मानिसहरूले भाइरल भएका भिडियोलाई सेयरमात्र गरिरहेका थिए अथवा दोहोर्‍याएर सुनिरहेका थिए । यद्यपि यो गीतको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सर्वसाधारणहरू नै यसरी उत्साहित भएका छन् कि उनीहरू स्वयं आफ्नो रोजाइका भर्सन तयार पारेर युट्युबमा अपलोड गर्न थालेका छन् । युट्युबमा यो गीतको हिन्दी, गुजराती, पञ्जाबी, राजस्थानी, मारवाडीसहित नेपाली भाषाको भर्सनसमेत उपलब्ध छ ।
पाकिस्तानमा पनि भाइरल
केही दिनअघिसम्म भारतमा मात्र सीमित यो गीत अहिले पाकिस्तानमा समेत भाइरल भएको छ । पाकिस्तानमा उक्त गीतमार्फत नवाज शरीफ तथा इमरान खानमाथि चुट्किला बनाउन थालिएको छ । कराँची ब्वाइजले पहिलो पटक इम्मू हमें तुझ पे भरोसा नहीमार्फत पाकिस्तानमा यो गीतको थालनी गरेको हो । उक्त ब्यान्डका सदस्य मन्सुरका अनुसार युट्युबमा सोनु गीत सुनेपछि त्यही गीतको धुनमा आधारित भएर नयाँ गीतको भिडियो रेकर्ड गरिएको हो । कराँची ब्वाइजले गीतमा इमरानलाई इम्मु भनेर सम्बोधन गरेका छन् ।
सोनु गीतले भारतमा त्यतिबेला लोकप्रियता पायो, जब मुम्बईकी रेडियो जक्की मलिष्काले त्यसमा आधारित भएर तयार पारिएको भिडियो युट्युबमा अपलोड गरिन् । मलिष्काले सडकमा भएका खाल्डाखुल्डीप्रति व्यंग्य कस्दै उक्त गीत गाएकी थिइन् ।
सोनु सङको नेपाली भर्सनले पनि लोकप्रियता हासिल गर्न थालेका छन् । युट्युबमा रूपसी बस्नेतले तयार पारेको सोनु सङको नेपाली संस्करण हालसम्म २ लाख ७४ हजार पटक हेरिएको छ । रूपसीले स्न्याप च्याटबाट मोडिफाइ गरेर तयार पारेको उक्त भिडियो ‘तिमीलाई ममाथि भरोसा छैन...’ शीर्षकमा फेला पार्न सकिन्छ । रूपसीको उक्त भिडियोसँगै युट्युबमा अहिले सोनु सङका दर्जनौं नेपाली भिडियो उपलब्ध छन् ।